Lọ HT | United Kingdom Franchises | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»Tlọ HT Franchise
Chọpụta ọnụ ala dị ọnụ ala nke ọkachamara na ahịa, ịhapụ na njikwa ihe onwunwe - na enweghị ego aha!
HT Ụlọ aha
Tlọ HT bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ na ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ya na UK nke ọkachamara na ahịa, ịhapụ na njikwa. N'ihi ọchịchọ na-arịwanye elu, Hlọ HT na-achọ ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ìgwè iji mee ka ezinụlọ HT eslọ gaa n'ógbè ha dị ka aha. Site na aha Hlọ HT, ị ga-erite uru site na mmiri iyi 4 nke bụ:
Ahịa na ikwe
Anyị emeela Hlọ HT site na ncha site na ibute ụzọ, ime ihe n'eziokwu na nghọta karịsịa ma a bịa n'akụkụ ego nke azụmahịa anyị. N'adịghị ka ọrụ 9 - 5 nke ọdịnala, na HT Homes, ka ị na-etinyekwu mgbalị, ka ị na-apụ n'ọrụ gị. Iji nweta nkọwa zuru ezu banyere ịnweta ikike na itinye ego na ego, biko jụọ n'okpuru iji nata mkpọ anyị.
Ihe Gụnyere na HT Ụlọ Aha?
Mgbe ị sonyere Tlọ HT, ị ga-enweta ngwaọrụ ndị dị n'okpuru iji nyere gị aka ịzụlite azụmaahịa ụlọ ọrụ ụlọ ahịa gị.
10 Iri na iteghete gị n'ụlọnga software
Floorplan na nyocha software
Nkwado mgbazinye - Nyochaa Ebe E Si Nweta, Ntughari
Mgbasa mgbasa ozi mgbasa ozi
Oku oku nkwado
Otu raara onwe ya nye ekwentị Mba na-akwụghị ụgwọ akara ala UK
Nwere ike ịhapụ oge ọ bụla (Enweghị nkwekọrịta nkwekọrịta)
Enweghị ụgwọ ego
HT Ụlọ Ọzụzụ na Nkwado
Ga - ewere usoro mbụ gị na usoro nnabata ụlọ obibi kpụ ọkụ n'ọnụ ebe ị ga - amụta ihe niile dị mkpa iji bụrụ nnukwu ụlọ ahịa na onye otu ezinụlọ HT Homes. Ọzụzụ gụnyere:
Etu esi azụ ahịa azụmahịa gị ma wuo akara.
Etu esi eji ihe onwunwe kpọrọ ihe.
Otu esi emepụta atụmatụ ala ụlọ.
Olee otú na-ewere ọkachamara àgwà onwunwe foto.
Etu esi dee nkọwa banyere ihe ndi doro anya ma sie ike ma depụta ha nke ọma.
Bestzọ kachasị mma iji kparịta ụka maka onye ahịa gị.
Nkwado dị mgbe niile ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla na akụkụ nke ịme azụmahịa ahụ, site na email na ekwentị.
Iji nweta nkọwa ndị ọzọ gbasara aha Tlọ HT, biko pịa n'okpuru iji mee ajụjụ. Anyị ga-ezitere gị nkọwa ndị ọzọ gbasara itinye ego, ihe gụnyere, inweta ikike na ndị ọzọ. Ọ na-efu ihe ọ bụla ị jụọ, ya mere kpọtụrụ taa ma mee ihe mbụ ị ga-eme n'ọdịnihu!